Arbaco, Dec 30, 2020-Baarlamaanka Hirshabeelle oo meelmariyay miisaaniyad sanaddeedka 2021 – LaacibOnline
Arbaco, Dec 30, 2020-Baarlamaanka Hirshabeelle oo meelmariyay miisaaniyad sanaddeedka 2021
December 30, 2020 Abdirisaaq	0 Comments
Arbaco, December, 30, 2020 (HOL)- Kulanka magaalada Jowhar ay maanta ku yeesheen xildhibaannada Baarlamaanka Dowlad Gobolleedka Hirshabeelle ayeey ku meelmariyeen miisaaniyad sanadeedka sanadka 2021ka.
nwsinsideMiisaaniyada waxaa horay u soo ansixiyay Golaha Wasiirradda KMG ee Hirshabeelle, iyadoo markii danbana loo soo gudbiyay Golaha Baarlamaanka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Xaaji Luqmaan oo kulanka shir guddoominayay ayaa xildhibaannada ka dalbaday in ay u codeeyaan miisaasiyada, iyadoo guud ahaan xildhibaannadii soo xaadiray 71 ka mid ah cod gacan taag ah ku ansixiyeen, Lamo mudane ayaa diiday halka mid kalana uu ka aamusay.
Fadhigga maanta ee xildhibaannada Hirshabeelle ayaa noqonaya Kalfadhiggii 1aad kulankiisii 12 aad , waxaana howlan oo dhan ay imanayaan xili wali khilaaf adag uu ka jiro hannaanka loo maray iyo sharciyada dhismaha labaad ee dowlad gobolleedka Hirshabeelle.
← 2020: a record-breaking year for Express Entry
Dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka Hiiraan →
Talaado, Sept 8 , 2020-Kenya oo hoos u dhigtay wada hadalada ay kula jirtay Soomaaliya illaa doorashada soo socota kadib
Sabti, Dec 19, 2020-Wafdi ka socda Dowladda Malawi oo gaaray magaalada Hargeysa
December 20, 2020 Abdirisaaq 0
Sabti, Nov 21, 2020-Ciidamada Itoobiya oo magaaladii labaad ka qabsaday xoogagga TPLF